मन्त्री भएको भोलीपल्ट नै एकाएक पेरिसडाँडा किन पुगे योगेश भट्टराई ? यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
मन्त्री भएको भोलीपल्ट नै एकाएक पेरिसडाँडा किन पुगे योगेश भट्टराई ? यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयमन्त्री योगेश भट्टराई तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा पुगेर जनयुद्धका सहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । भट्टराई मन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट पेरिसडाँडा पुगेका हुन् । नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकसहित बिहीबार बिहान पेरिस डाँडा पुगेका भट्टराईले त्यहाँ स्थापना गरिएको जनयुद्धका सहिद तथा वेपत्ताहरूको स्मरणमा बनाइएको स्तम्भमा फूलका गुच्छा चढाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि पेरिसडाँडा पुगेर जनयुद्धका सहिद तथा वेपत्ताहरूको स्मरण गर्ने योगेश पहिलो मन्त्री हुन् । पेरिसडाँडामा पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले नेकपालाई अहिलेको स्थानसम्म पुर्‍याउन जनयुद्धका सहिद तथा वेपत्ताहरुको पनि योगदान रहेको बताए ।
यसैबीच, मन्त्री भट्टराई बिहीबार बिहान नै तत्कालीन एमालेको पुरानो पार्टी कार्यालय मदननगर बल्खु पुगेर मदन भण्डारीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । पर्यटनमन्त्रीको सपथग्रहण लगत्तै बुधबार उनी लैनचौरस्थित सहिद स्तम्भ पुगेका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भट्टराईलाई बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका थिए । भट्टराईले बुधबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै सिंहदरबार आएर पदभार सम्हालिसकेका छन् ।
त्यस्तै फूलमाला र खादाको स्वागतसँगै मन्त्रालय छिर्दा योगेश भट्टराई भावुक देखिन्थे। राजनीतिमा सधैंका सहयात्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त मन्त्रालयको नेतृत्व काँधमा आउँदा उनी भावुक देखिनु स्वाभाविक थियो। विद्यार्थीकालदेखि एकै मोर्चाका सहयात्री थिए, योगेश र रवीन्द्र। मन्त्रालयमा छिर्नुअघि योगेशले भने, ‘म रवीन्द्र अधिकारीको उत्ताराधिकारी हुँ भन्नुमा गर्व छ।’ योगेशले कार्यभार सम्हालेपछि रवीन्द्रलाई नै पहिले सम्झे। ‘मैले भन्दा रवीन्द्रले नै मन्त्रालय राम्ररी समाल्न सक्नुहुन्थ्यो। तर, प्रकृति र नियतिलाई रोक्न सकिएन,’ योगेशले भने।
पार्टी राजनीतिमा योगेश अग्रज भए पनि संसदीय मोर्चा र शासकीय जिम्मेवारीमा रवीन्द्र अनुभवी थिए। पहिलोचोटि संसद् छिरेका योगेशले संसदीय अभ्यास रवीन्द्रसँगै सिकेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले योगेशलाई उनै रवीन्द्रले सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर दिए। योगेशले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको शपथ लिए। गत फागनु १५ मा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीको ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हाल्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्रीले योगेशलाई पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए। ‘सहृदयी मित्र’ रवीन्द्रले सम्हालेको मन्त्रालय र त्यो पनि आफ्नै गृहजिल्लामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका कारण योगेशले मानेका थिएनन्। पार्टीभित्रको ‘चर्काे दबाब’ र सरकारको प्रतिरक्षामा योगेशले खेलेको भूमिकाले योगेशलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री बाध्य भएका हुन्।